Kumutungamiriri; runofanira kuimbwa pamwe nezviridzwa zvine tambo zvichiridzwa nemutinhimira weSheminiti.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 6 Haiwa Jehovha, musanditsiura makatsamwa,Musandiruramisa makashatirwa.+ 2 Ndinzwireiwo nyasha* Jehovha, nekuti ndiri kupera simba. Ndiporeseiwo Jehovha,+ nekuti mapfupa angu ari kudedera. 3 Ndiri* kunetseka chaizvo,+Uye kusvikira riini, nhai Jehovha?+ 4 Dzokai, Jehovha, ndinunureiwo;*+Ndiponeseiwo nekuti mune rudo rusingachinji.+ 5 Nekuti hapana anokutaurai* murufu;Ndiani achakurumbidzai muGuva?*+ 6 Simba rangu rapera nekugomera kwangu;+Ndinozadza mubhedha wangu nemisodzi usiku hwese;Pandinorara panoti chakwata nekuchema+ kwangu. 7 Ziso rangu raneta nenhamo;+Harichanyatsooni* nemhaka yevaya vari kunditambudza. 8 Ndisiyei, imi mese munoita zvakaipa,Nekuti Jehovha achanzwa kuchema kwangu.+ 9 Jehovha achanzwa kukumbira kwangu kunzwirwa nyasha;+ Jehovha achagamuchira munyengetero wangu. 10 Vavengi vangu vese vachanyadziswa uye vachanetseka;Vachangoerekana vadonha nekunyara.+
^ Kana kuti “Mweya wangu uri.”
^ Kana kuti “nunuraiwo mweya wangu.”
^ Kana kuti “anokuyeukai.”
^ Kana kuti “Rachembera.”